Makodhi Ekuzvibata - Sichuan Aixiang Technology Co., ltd.
Basa uye Kubasa
Yakaenzana Basa Mukana / Kusasarura
Isu tinotenda kuti zvese zvirevo uye mamiriro ebasa anofanirwa kuve akavakirwa pamunhu kugona kuita basa uye kwete pahwaro hwehunhu kana zvitendero. Isu tinopa vashandi nzvimbo yekushanda isina rusarura, kushungurudzwa, kutyisidzirwa kana kumanikidzwa zvine chekuita nenzira yakanangana kana zvisina kunangana nedzinza, chinamato, zvebonde, maonero ezvematongerwo enyika kana hurema.
Isu hatishandise chero jeri, muranda, indentured, kana kumanikidzwa basa mukugadzirwa kwechero zvigadzirwa zvedu.
Isu hatishandise basa revana mukugadzira chero chigadzirwa. Hatishande chero munhu ari pasi pezera re 18, kana zera rakamanikidzwa chikoro kupera, chero mukuru.
Isu tinochengetedza zvine musoro zvevashandi nguva yekushanda zvichibva pamiganhu yenguva dzose uye nguva yekuwedzera inobvumidzwa nemutemo wepanzvimbo, kana uko mutemo wemuno usingatenderi maawa ebasa, iro rinowanzoitwa vhiki rekushanda. Nguva yekuwedzeredza, pazvinenge zvichidiwa, inobhadharwa zvizere zvinoenderana nemutemo wepanzvimbo, kana pamwero unenge wakaenzana neyakajairwa nguva yekubhadharisa kana pasina mutemo wakatemwa zviri pamutemo. Vashandi vanobvumidzwa mazuva anonzwisisika ekuzorora (chero zuva rimwe chete rekubuda mumazuva manomwe-ese) uye vanosiya ropafadzo.
Isu tinobvuma kukosha kwevashandi vedu uye tinobata mushandi wega nekuremekedza uye neruremekedzo. Hatishandisi hutsinye uye zvisina kujairika maitiro ekuranga senge kutyisidzira kwemhirizhonga kana dzimwe nzira dzekushungurudzwa panyama, pabonde, zvepfungwa kana kutukwa kana kushungurudzwa.
Isu tinobhadharira vashandi vedu nekuteerera nemitemo yese inoshanda, inosanganisira shoma mibairo, kana iriko irimo indasitiri mubhadharo, chero iri kumusoro.
Isu tinochengetedza nzvimbo yakachengeteka, yakachena uye ine hutano mukuteerera kune ese anoshanda mitemo nemirau. Isu tinopa nzvimbo dzekurapa dzakaringana, zvimbuzi zvakachena, kuwana zvine mwero mvura yekunwa, nzvimbo dzakabatidzwa nemwenje, uye kuchengetedzwa kubva kuzvinhu zvine ngozi kana mamiriro. Izvo zviyero zvehutano nekuchengeteka zvinoshandiswa mune chero dzimba dzatinopa kune vedu vashandi.
Isu tinotenda isu ibasa redu kuchengetedza nharaunda uye tinoita izvi nekuteerera zvese zvinoshanda zvakatipoteredza mitemo nemirau.
Maitiro Ebhizinesi Ekuita
Itsika yedu kurambidza vashandi kuti vapinde muzvinhu zvine hunyanzvi - kuita bhizinesi kunoonekwa sekunge kusiri pamutemo, kusazvibata, kusiri kwehunhu kana kuratidza kusatendeseka kuvimbika kweKambani. Aya mashandisirwo anowanzo kuuya nenzira yechiokomuhomwe, maripiro, zvipo zvekukosha kwakakosha kana mibairo inoitwa kukurudzira zvakanaka sarudzo dzinokanganisa bhizinesi rekambani kana kuti uwane wega munhu.
Tinorambidza vashandi kuti vagamuchire, zvakananga kana zvisina kunangana, chero chinhu chakakosha mukushandisa kana kubvuma kushandisa chinzvimbo chake kubatsira mumwe munhu iyeye. Saizvozvowo, chiokomuhomwe chekutengesa, kubhadharisa, zvipo uye zvimwe zvakabhadharwa uye mabhenefiti akapihwa chero mutengi anorambidzwa. Nekudaro, izvi hazvirevi mari yemari inonzwisisika pakudya nekuvaraidzwa kwevatengi kana zviri pamutemo, uye zvinofanirwa kuverengerwa pamishumo yemubhadharo uye nekutenderwa pasi peyakajairika Kambani maitiro.
Kudzora Accounting, Maitiro uye Zvinyorwa
Isu tinonyatso chengeta mabhuku uye marekodhi ezvese zviitiko uye marongero epfuma yedu sezviri kudiwa nemutemo, pamwe nekuchengetedza maitiro ekudzora zvemukati zvemari kuona kuvimbika uye kukwana kwemabhuku edu uye marekodhi. Isu tinoona chete kungoitika pamwe neakakodzera manejimendi mvumo zvinoverengerwa mumabhuku edu uye zvinyorwa.
Use uye Kuzivisa kweMukati Ruzivo
Isu tinorambidza zvachose kuburitswa kwemukati memashoko kune vanhu vari mukati mekambani vane zvigaro zvinoramba kuwana ruzivo rwakadai. Mukati meruzivo pane chero data risina kuburitswa pachena.
Chakavanzika kana Ruzivo Rwechokwadi
Isu tinotora zvakanyanya kuchengetedza vatengi vedu 'kuvimba uye kuvimba matiri. Nekudaro, tinorambidza vashandi kuburitsa pachena zvakavanzika kana ruzivo rwekunze kunze kweKambani izvo zvinogona kukuvadza vatengi vedu, kana kune iyo Kambani pachayo. Ruzivo rwakadai runogona kungogoverwa nevamwe vashandi pane inoda-kuziva-hwaro.
Isu takagadzira mutemo wedu kubvisa kusawirirana pakati pezvinodiwa nevashandi neKambani. Sezvo zvichinetsa kutsanangura kuti chii chinonzi kupesana kwechido, vashandi vanofanirwa kuve nehanya nemamiriro ezvinhu anogona kumutsa mibvunzo yekukakavadzana kana kunetsana pakati pezvido zvekambani. Kushandisa kwega kwega Kambani chivakwa kana kuwana masevhisi eKambani kuti ubatsirwe pachako kunogona kuita kupesana kwechido.
Kubiridzira uye Kukanganisa Kwakafanana
Isu tinorambidza zvachose chero hunyengeri hunogona kukuvadza vatengi vedu nevatengesi, pamwe neiyo Kambani. Isu tinoteedzera mamwe maitiro ane chekuita nekucherechedzwa, kuzivisa uye kuongorora kwechero chiitiko chakadai.
Kuongorora uye Kuteerera
Isu tinotora chirongwa chechitatu-bato rekutarisa kusimbisa kutevedzera kweKambani iyi Kodhi yeMitemo. Kuongorora zviitiko zvinogona kusanganisira zvakaziviswa uye zvisina kuziviswa pane-saiti fekitori kuongororwa, kuongororwa kwemabhuku uye zvinyorwa zvine chekuita nenyaya dzebasa, uye kubvunzana kwakazvimirira nevashandi.
Kuongorora uye Zvinyorwa
Isu tinodoma mumwe kana vanopfuura vemaofficial edu kuti vaongorore nekusimbisa kuti Kodhi yeMafambiro ekambani iri kucherechedzwa. Zvinyorwa zveichi chitupa zvichawanikwa kune vedu vashandi, vamiririri, kana vechitatu mapato kana chikumbiro.
Isu tinoteedzera nekuremekedza kodzero dzose dzeIntellectual Property panguva yekuita bhizinesi redu pamisika yepasirese neyepamusha.